Adịkwa ekeresimesi m si Mac | Esi m mac
M si Mac chọrọ ka ị a ekeresimesi oma!
Ndị otu Soy de Mac niile chọrọ gị niile ekeresimesi ọma na ezumike ezumike na ụlọ nke gị. Ihe mbụ ịkọwapụta na tupu ya agafee anyị, bụ ịkele onye ọ bụla n’ime gị maka nkwado na agbamume ị na-enye anyị kwa ụbọchị. Ndi otu ndi otu akwukwo nwere obi uto inwe otutu ndi oru ndi n’eso anyi ma kwado anyi n’aho na n'ihi na anyị ga-ekele gịỌ bụ ezie na ọ bụ cliché ikwu ya, na-enweghị gị nke a agaghị abụ otu.
2015 bụ afọ na-adọrọ mmasị maka ngwaahịa Apple, ma ọ bụ eziokwu na Mac ole na ole ozi natara afọ a n'agbanyeghị na ha hụrụ mwepụta nke a macbook ọhụrụ 12-anụ ọhịa "akọrọ" na Mkpa ọkụ karịa MacBook Ikuku. Na mgbakwunye na MacBook ọhụrụ a, anyị ahụla ọbịbịa nke ọhụrụ OS X 10.11 El Capitan ndien ke akpatre Retina na-egosiputa na iMac na mgbanwe na ndị nhazi nke MacBook Pro na mmejuputa nke Force Touch. N’adịghị ka desktọọpụ dị ike nke Apple, Mac Pro anatabeghị mgbanwe ọ bụla yana enweghị Mac mini.
Olileanya na 2016 a niile Macs na-enwetụbeghị mgbanwe ma ọ bụ mmepe banyere ngwaike dị n'ime ma ọ bụ ọbụlagodi imewe ahụ ọtụtụ afọ, oge ha ga-abịa na Apple ga-eme mgbanwe maka mma. Mana ka anyị hapụ Apple na akụkọ metụtara ụlọ ọrụ Cupertino maka obere oge kele gị ọzọ maka nkwado gị enweghị atụ. N'aha ndi otu edemede ihe niile, esi m na Mac, ana m asi unu niile EZI EKERESIMESI!!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » M si Mac chọrọ ka ị a ekeresimesi oma!
Jordi, aha m bụ Alvaro Larriu, abụ m onye ọdịnala si Pamplona, ​​enwere m nkuzi m niile na Power Point, yana ụlọ ọrụ 2016, ha mechiri m, ọ na-egbu egbu, ọ na-ada, ha wụnye ihe ndị ahụ, mana foto hapụ ịdị mma, ugbu a ana m ejikwa ọtụtụ isi okwu, mana ebe m nwere ihe niile na Ike, ọ na-esiri m ike ịgbanwe, ma ọ bụrụ na m mepee isi okwu, n'ụzọ ezi uche dị na mkpụrụedemede, mmetụta wdg, ị maara ihe gbasara ma ọ ga-emeziwanye ma ọ bụ zụta hp ma ọ bụ ihe yiri ya.
Ndo, ekele n'ọdịnihu na Adịkwa Christmas
Olee otú ekenye ụdaolu dị iche iche na kọntaktị gị na iPhone
Okuku Drive 2, ihe ụtọ na free ụgbọ ala egwuregwu